Madheshvani : The voice of Madhesh - जनकपुरलाई ‘म्यारिज डेस्टिनेशन’को रूपमा विकास गरिनेछ : लालकिशोर साह
जनकपुरलाई ‘म्यारिज डेस्टिनेशन’को रूपमा विकास गरिनेछ : लालकिशोर साह
मेयर, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका
२०७५ साल मंसिर २१ गते शुक्रबार
० रामजानकी विवाह महोत्सवको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?
— रामजानकी विवाह महोत्सव जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण पर्व हो । त्यस हिसावले उपमहानगरपालिकाले युद्धस्तरमा तयारीमा लागेको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका अहिले नवनिर्माणको दिशामा अगाडि बढेको छ । बाटोघाटो विस्तारदेखि लिएर अन्डरग्राउण्ड ड्रिनेज, स्फाल्ट पिच, वृक्षरोपण लगायतका कामहरू भइरहेका छन् । विवाहमहोत्सवलाई मध्यनजर गर्दै सरसफाइलाई जोड दिएका छौं । विवाह महोत्सवमा भारतबाट आउने तिर्थालुहरूको स्वागतका लागि विशेष प्रबन्ध मिलाउँदैछौं । यसपटक हामी विवाह महोत्सवलाई भव्य बनाउन विशेष तरिकाले तयारी गरिरहेका छौं ।
० विवाह महोत्सवको तयारीमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच कसरी समन्वय हुँदैछ ?
— जनकपुरधाममा पौराणिक कालदेखि नै यो महोत्सव हुँदै आएको छ । त्यसैले, यसको तयारीबारे एउटा प्रणाली नै बसिसकेको छ । जानकी मन्दिर, राम मन्दिर लगायत ५२ कुट्टी ७२ कुण्डमा आआफ्नै किसिमले तयारी भइरहेको छ । यसको व्यवस्थापन स्थानीय निकाय, प्रहरी प्रशासन र मन्दिरहरूले आआफ्नै किसिमले गर्दै आएको परिपाटि बसिसकेको छ । यसमा प्रदेश, केन्द्र वा स्थानीय सरकारले के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा आउँदैन । प्रदेशले के गरेको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन । प्रदेश सरकारले केही रकम छुट्याएको छ भनेर हामीले सुनेका छौं । तर, त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । मूलरूपमा विवाह महोत्सवका लागि एउटा सिस्टम बसिसकोको छ र त्यहीअनुसार भइरहेको छ ।
० विवाह महोत्सव तयारीका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रूपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो, त्यसको के हुँदैछ ?
— प्रदेश सरकारले ५० लाख दिने कुराको औपचारिक जानकारी मलाई छैन । मैले पनि सञ्चारमाध्यमहरूबाट नै थाहा पाएको हुँ । विवाह महोत्सव भनेको राजनीतिक प्रचार गर्ने थलो होइन । विवाह महोत्सवको मेला हरेक वर्ष लाग्ने गरेको छ र हाम्रो मौलिकतासँग जोडिएको कुरो हो । यसलाई हामीले विवाह महोत्सवको रूपमा लिएका छौं । तर, हामीले विवाह महोत्सवको कुनै कार्यक्रम गर्न राख्न सकेनौं । हाम्रो दीर्घकालीन योजनामा छ कि विवाह पञ्चमी मेलामा कम से कम हजारौं जोडी एक साथ विवाह गरोस् अथवा वर्षभरि नै जनकपुरधाममा आएर विवाह गर्ने प्रचलन बढोस् त्यस हिसावले हामी गरिरहेका छौं । जनकपुरधामलाई ‘म्यारिज डेस्टिनेशन’को रूपमा विकास गर्ने सोच हाम्रो छ ।
० विवाह पञ्चमीमा भारतको उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगी जन्ती बनेर आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको आगमनबारे तपाइँहरूको तयारी रहेको छ ?
— भारतको उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीजी आउनुहुन्छ भन्ने अहिलेसम्म मैले सुनेको मात्र छु । हामीलाई औपचारिकरूपमा जानकारी आइसकेको छैन । भारतीय कुटनीटिक नियोगका पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्दा योगीजी आउने पक्कापक्की रहेको जनाइएको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारको प्रहरी प्रशासनसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ र त्यस हिसावमा पनि तयारी भइरहेको छ । तर, औपचारिकरूपमा कुनै जानकारी नआउञ्जेल योगीजीको आगमनबारे मैले प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन । तर, आउने सम्भावना बढी देखिएको छ । मैले बुझ्दा उहाँको जनकपुरधाम आगमन शतप्रतिशत धार्मिक यात्रा हुनेछ । उहाँ लखनऊबाट सिधा जनकपुरधाम विमानस्थलमा ओर्लिने र लगभग चार÷पाँच घन्टा जनकपुरधाम बसाई हुने मैले बुझेको छु ।
० अब फरक विषयमा कुरा गरौं, तपाइँ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा मेयर भएदेखि जनताले अनुभूति गर्ने खालका के कस्ता कामहरू गर्नुभयो त ?
— हामी निर्वाचित भएर आएको यो १५औं महिना चलिरहेको छ । यो समयावधिमा हामीले मुख्य गरेर बाटोघाटो बनाउने, पुराना परियोजनाहरू जुन जीर्ण अवस्थामा थियो त्यसलाई पुनर्जीवन गर्नेतिर लाग्यौं । एकदमै तीव्रगतिमा ती परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं । उद्योगी, व्यवसायी, युवा, विद्यार्थी सबैको सहयोगबाट कतिपय कामहरू गर्न सफल भएको छ । लगभग ३३ किलोमिटरको एरियामा हामीले अन्डरग्राउण्ड ड्रेनेज, स्फाल्ट पिचको काम केही दिनमा सम्पन्न गर्छौं । फुटपाथ बनाउने काम पनि तीव्रगतिमा गरिरहेका छौं । एयरपोर्टदेखि रेल्वे स्टेशनसम्म सडकको दुवैतिर बिजुली बत्तीको व्यवस्था गर्न लागेका छौं । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका २५ वटै वार्डका वडा कार्यालय आफ्नै भवनमा होस् भन्ने सोचमा छौं । नवनिर्माणको दिशामा जनकपुरधाम जसरी अहिले अगाडि बढेको छ, यो ऐतिहासिक क्षण हो । हामीले जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरेर संवैधानिकरूपमा जनकपुरधाम नामाकरण गरेका छौं । हामीले जनकपुरधामलाई केशरिया रंगले रंग्ने अभियान चलाएका छौं । जति पनि घरहरू भत्केका छन्, पेन्ट गरिएको छैन तिनीहरूका लागि हामीले निःशुल्क केशरिया रंग उपलब्ध गराउन थालेका छौं । मिथिला सांस्कृतिक सहर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको रूपमा परिचित होस् । हामीले हरेक कर्मचारीलाई ड्रेस कोड पनि केशरिया रंगमा दिएका छौं । यसैगरी, हामीले स्थानीय गान पनि दिएका छौं ।
० दीर्घकालीन योजना के छ ?
— हामीले सरसफाइलाई स्थायित्व कसरी दिने, हरियाली कसरी ल्याउने लगायतका दीर्घकालीन योजनाहरू छन् । जनकपुरधाममा हरियालीका लागि हामीले छुट्टै बजेट पनि छुट्याएका छौं । पाँच वर्षमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई शतप्रतिशत साक्षरताका लागि कार्ययोजना बनाएका छौं । साक्षरताका लागि हामीले हरेक वार्डमा एउटा सर्वे गराइरहेका छौं । त्यो रिपोर्टको आधारमा शिक्षामा सबैको सहज पहुँचका लागि योजना बनाउँदैछौं । युवाहरूलाई परिचालित गर्न हामीले विभिन्न योजनाहरू बनाएका छौं । कुलतमा फँस्दै गएका युवाहरूलाई त्यसबाट मुक्त गर्नका लागि एन्टी ड्रग्सको अभियान पनि चलाउने छौं । जनकपुरधामका लागि कुलत एउटा ठूलो रोगको रूपमा रहेको छ । यस्ता थुप्रै योजनाहरू हामी ल्याउँदैछौं ।
० तर, तपाइँहरूको कामप्रति त्यहाँ जनता सन्तुष्ट छैनन् नि ?
— करिब २० वर्षपछि स्थानीय सरकार आएको हो । विगतका जुन किसिमका अस्तव्यस्तता थियो त्यसलाई हटाउँदै हामी काम गरिरहेका छौं । हामीले जुन काम गरिरहेका छौं त्यसबाट जनता सन्तुष्ट नै छन् । हाम्रो न्याय प्रणाली नेपालकै उत्कृष्ट होला । हामीले जनतालाई शतप्रतिशत सन्तुष्ट त गर्न सक्दैनौं तर जनतालाई सेवा दिन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं । हामी गुनासो सुन्ने, आपतकाल सेवा लगायतका शाखाहरू खोल्दैछौं । हामीले आपतकालमा २४सैं घन्टा सेवा दिनका लागि एउटा शाखा खोल्दैछौं । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका जनताको सेवामा २४सैं लागिरहनेछ भन्ने अवधारणा ल्याउँदैछौं ।